'धुर्मुसले बनाउँदै गरेको क्रिकेट रंगशाला भत्काउनै पर्छ' - TajaKhabarTV
‘धुर्मुसले बनाउँदै गरेको क्रिकेट रंगशाला भत्काउनै पर्छ’
२०७७, २२ चैत्र आईतवार १०:५६ April 4, 2021 ताजा खबरक्रिकेट, विचार
सहयोगको नाममा देशको स्वाभिमान र अभिमान बेचेर, विदेशीको अगाडी घुँडा टेकेर कमिसन खाएर बचेकुचेको रकमबाट बनेको बाटो घाटो पुल पुलेसो अनेकौँ संरचनालाई विकासको संज्ञा दिएर खुसी हुने हामी नेपाली । जनताकै छोरोले देशकै जनताको पौरखबाट आर्जन गरेको थोरै थोरै रकम सङ्कलन गरेर देशले नै गर्व गर्न लायक एक रङ्गशाला निर्माण गर्छु भन्दा वि रो ध गर्नेहरू दे श द्रो ही हुन् । १० औँ लाख मान्छेको करोडौँ रकम र करोडौँ मान्छेको सपना र माया जोडिएको रङ्गशाला बन्नु आफैँमा विश्व दुर्लभ कुरा हो ।
विवादहरूबारे मेरो भनाईँ :
🤔विवाद १. रङ्गशाला बनाउन कृषि अनुसन्धान विश्वविद्यालयको जग्गा मात्र थियो ? यहाँ कृषि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
जवाफ : अन्त धेरै ठाउँ खोजी भएको थियो कोइ दिन राजी भएन । अर्को कुरा कृषि अनुसन्धान गर्न देशै भर कृषियोग्य भुमि छ । रङ्गशालाबाट रोयल्टी लिएर आम्दानी प्रवर्द्धन गर्दै सो रकम कृषि अनुसन्धानमा लगाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय भनेको एक सिक्ने ठाउँ हो टि युमा पनि त छन् खेलमैदानहरू त ।
🤔विवाद २ : यो सरकारले गर्ने काम हो ।
जवाफ : सरकारले गरेको भए व्यक्तिले गर्नै पर्दैन थ्यो । मुलपानी रङ्गशालाको हविगत नदेख्या होर १० वर्ष हुँदा पनि अझै खेत जस्तो मैदान छ । यो सरकारमाथिको दबाब हो, यो एक आन्दोलन हो ।
🤔विवाद ३ : मागेर समाजसेवा हुँदैन ।
जवाफ : किन हुँदैन । तर इमान्दार व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।एक व्यक्तिको २/४ हजारले ठुला विकास सम्भव छैन तर लाखौँ व्यक्तिको २/४ हजारले ठुला आयोजना बन्न सक्छन् जसले राष्ट्र हित पनि गर्छ दिनेले पनि बोझ महशुस गर्दैन् ।
🤔विवाद ४ : किन चाहियो रङ्गशाला अस्पताल स्कूल खोल्नुपर्छ बाटो बनाउनुपर्छ ।
🇳🇵जवाफ : हो यी सबै बन्नुपर्छ तर सब्बैले अस्पतालै स्कूलै बनाउनपर्छ भन्ने छैन । क्रिकेटमा विश्वको top 15 भित्र पर्ने देशमा अन्तरास्ट्रिय स्तरको एक पनि stadium नहुनु कति लज्जस्पद कुरा हो ? आजको पुस्तालाई यसमा दु:ख लाग्छ भोलीको पुस्ताले श्राप्छ । यदी रङ्गशाला बनेन भने ।
🤔अन्तयमा, रङ्गशाला भत्काउनुपर्छ ।
जवाफ : कस्का बाउको तागत छ लाखौँ जनताको समर्थन, साथ, सहयोग, भावना, लगाव, लागत, पसिना, पौरख, सपना र आशाको धरोहरको एक इट्टामात्र पनि झिक्ने ?
मेरा कुरा चित्त बुझे कपि गरेर आफ्ना कुरा थपेर शेयर गर्नुहोला ।
यो सामाग्री हामीले फेसबुकमा भेटाएका हौ। जसलाई कमल न्यौपाने जीले लेख्नु भएको हो ।